ALQO အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်, converter ALQO ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလဲလှယ်စျေးကွက်အပေါ်စျေးနှုန်းယနေ့။
ALQO စျေးနှုန်း မြန်မာကျပ်ငွေ (MMK)
1 ALQO (ALQO) တန်းတူ 92.79 မြန်မာကျပ်ငွေ (MMK)
1 မြန်မာကျပ်ငွေ (MMK) တန်းတူ 0.010777 ALQO (ALQO)
ပြောင်းပေးတဲ့ ALQO တွင် မြန်မာကျပ်ငွေ။ ယနေ့တွင် ALQO မှုနှုန်း သို့ မြန်မာကျပ်ငွေ တွင် 13/12/2019.
ALQO စျေးနှုန်း ဒေါ်လာ (USD)
1 ALQO (ALQO) တန်းတူ 0.061498 ဒေါ်လာ (USD)
1 ဒေါ်လာစျေး (USD) တန်းတူ 16.26 ALQO (ALQO)
ပြောင်းပေးတဲ့ ALQO ဒေါ်လာပါ။ ယနေ့တွင် ALQO မှာတဒေါ်လာနှုန်းကို 13/12/2019.
ALQO စျေးနှုန်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးတနည်းအားဖြင့်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့အမျိုးသားငွေကြေးနဲ့မတူပဲဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘဲရှိနေပါတယ်။ ALQO စျေးနှုန်းအားဖလှယ်မှုရှိလွတ်လပ်သောစျေးကွက်ရှိငွေပေးငွေယူတစ်ခု၏ရလဒ်အနေဖြင့်ရရှိသည်။ ALQO စျေးနှုန်း၏ဒိုင်းနမစ်သည်မနက်ဖြန်အတွက် ALQO ၏စျေးနှုန်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ စာမျက်နှာ ALQO စျေးနှုန်း 13/12/2019 "ဒီစာမျက်နှာကိုအခမဲ့အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းတွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီပြုပြင်သည်
ALQO ဒီနေ့ငွေလဲလှယ်ရေးစားပွဲပေါ်မှာ ALQO ၏အရောင်းအ ၀ ယ်၊ အရောင်းအ ၀ ယ်၊ ရောင်းဝယ်မှု၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ကုန်သွယ်ရေးအတွဲများနှင့်အပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ အဆိုပါလေလံကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ALQO ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုရိုးရှင်းတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကအကောင်းဆုံးလဲလှယ်ရေးလဲလှယ်သူကိုသင်ကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ ALQO စျေးနှုန်း မြန်မာကျပ်ငွေ ALQO to မြန်မာကျပ်ငွေ ။ သင်တိုက်ရိုက်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုစိတ်ဝင်စားပါက ALQO - အရောင်းအ ၀ ယ်များ၏အမှန်တကယ်စျေးနှုန်းကိုပြသသော မြန်မာကျပ်ငွေ - ALQO သို့မှသာ၎င်းတို့သည်မှန်ကန်သောကုန်သွယ်မှုစုံတွဲကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်လဲလှယ်ခြင်းဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုစာရင်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။
အားလုံး ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး စျေးကွက်ကနေအကောင်းဆုံး ALQO ငွေလဲနှုန်းယနေ့။ ယနေ့ ALQO ဝယ်ဖို့သို့မဟုတ်ရောင်းဖို့အကောင်းဆုံးစျေးကွက်။
ALQO ဒေါ်လာ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - ALQO ၏စျေးနှုန်းကိုဒီနေ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှု၏ bot မှတွက်ချက်သည် 13/12/2019 ။ ALQO နှင့်ဒေါ်လာစျေးရောင်းဝယ်မှုသည်အခြားငွေကြေးများနှင့်နှိုင်းစာလျှင်ပိုမိုကြီးမားသည်။ ALQO သီးခြားအယူအဆတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ALQO စျေးနှုန်းဟာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး လဲလှယ်မှုပမာဏအပေါ်အနည်းငယ်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားတဲ့ပမာဏအတွက်ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ALQO ဒီနေ့အတွက်စျေးနှုန်းကိုအမျိုးမျိုးသောအရောင်းအ ၀ ယ်ပြုသည့်အရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးတွင် ALQO ၏တန်ဖိုးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွက်ချက်သည်။
ALQO တန်ဖိုး မြန်မာကျပ်ငွေ သည်ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည် ALQO ဒေါ်လာသို့ကူးပြောင်းသည် မြန်မာကျပ်ငွေ လက်ရှိနှုန်းထားအတိုင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးကိုဒေတာဘေ့စ်သို့တင်ထားပြီးပျမ်းမျှ ALQO သို့ဒေါ်လာလဲလှယ်နှုန်းကိုတွက်ချက်သည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏ဗဟိုဘဏ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့ ALQO မြန်မာကျပ်ငွေ လဲလှယ်နှုန်းကိုယနေ့ရရှိသည်။ စျေးနှုန်း ALQO အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်စျေးနှုန်းကွာခြားသည် ALQO သည်လက်ရှိနှုန်းထားအရဆုံးဖြတ်သည် ALQO ဒါပေမယ့်လည်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းပမာဏအရ ALQO ငွေပေးငွေယူတစ်ခုတည်း။ သင်၏ကန်ထရိုက်စာချုပ်သည်ပျမ်းမျှပမာဏနှင့်ကွဲပြားလျှင်များသောအားဖြင့် ALQO ၏ပျမ်းမျှငွေလဲလှယ်နှုန်းနှင့်ကွာခြားနိုင်သည်။
ALQO ဂဏန်းတွက်စက်အွန်လိုင်း - ALQO ငွေပမာဏကိုလက်ရှိ ALQO ငွေလဲနှုန်းဒါမှမဟုတ်အခြား ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ။ တစ်ခုနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးပြောင်းလဲခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်၎င်းဖြစ်သည် ALQO မှ မြန်မာကျပ်ငွေ ဂဏန်းတွက်စက်၊ ငွေပမာဏကိုပြသည် မြန်မာကျပ်ငွေ အချို့သောပမာဏကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်လိုအပ်သည် ALQO ALQO အွန်လိုင်းပြောင်းလဲသူ - မည်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး သို့မဟုတ်အမျိုးသားငွေကြေးကို ALQO ကိုလက်ရှိပျမ်းမျှလဲလှယ်နှုန်းလဲလှယ်ပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး converter ကိုခေါ်သည့် အိမ် ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက်အခမဲ့အွန်လိုင်းအပိုင်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။